Ulawulo lokuzalwa ngelixa uncancisa: Olona khetho lufanelekileyo koomama - Imfundo Yezempilo | Eyenkanga 2021
Ekuhlaleni Cinezela Uluntu, Inkampani Imidlalo Enzima Iindaba Iindaba, Impilo Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi Ulwazi Lweziyobisi Izilwanyana Zasekhaya Imidlalo Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba Imfundo Yezempilo, Impilo Imfundo Yezempilo, Izilwanyana Zasekhaya Inkampani Iziyobisi Vs. Umhlobo
Eyona >> Imfundo Yezempilo >> Ngaba ungalusebenzisa ulawulo lokuzalwa kwehomoni ngelixa uncancisa?
Ngaba ungalusebenzisa ulawulo lokuzalwa kwehomoni ngelixa uncancisa?
Le yinxalenye yothotho lokuncancisa ukuxhasa iNyanga yeSizwe yokuNcelisa (ngeyeThupha). Fumana ingxelo epheleleyo Apha .
Emva kokuba umfazi ezele, ukuba nomnye umntwana kunokuba yinto yokugqibela engqondweni yakhe. Abanye oomama abangabongikazi bakholelwa ukuba banokuthintela ngempumelelo ukukhulelwa ngokuqhubeka nokonga iintsana zabo. Kodwa ngokuchasene nenkolelo edumileyo, kunokwenzeka ukuba uyifumane ukhulelwe ngelixa uncancisa -Yiyo le nto kufuneka ucinge ngendlela onokuthi uthintele ngayo ukukhulelwa ngaphambi kokuba uqalise ngesondo.
Abanye abantu basetyhini bathembele kwiindlela zokuthintela ukukhulelwa, ezinjengeekhondom okanye uvalo. Abanye banokukhetha isixhobo se-Intrauterine Device (IUD) sobhedu. Kodwa olunye ukhetho oludumileyo kuthintelo lokukhulelwa lusalawulwa ngokuzalwa kwehomoni.
Ukuthatha ulawulo lokuzalwa kwehomoni ngelixa uncancisa
Uninzi lweendlela zokucwangcisa i-hormonal zikhuselekile ukuba oomama abangabongikazi bazithathe, ngokwe ILigi yeLa Leche . Inani elincinci lehomoni eyenziweyo iya kungena kubisi lwakho lwebele kwaye idluliselwe emntwaneni wakho, kodwa ayizukumenzakalisa umntwana. Nangona kunjalo, bukhona ubungqina bokuba iintsana ezincinci kakhulu, ezingaphantsi kweeveki ezintandathu ubudala, zisenokungakwazi ukuhambisa iihormone, ke oogqirha bacebisa ukuba bangaqali ulawulo lokuzalwa kwehomoni kangangeeveki ezintandathu emva kokuzalwa.
Ulawulo lokuzalwa lweHormonal unokuza ngeendlela ezininzi:
Ukudibanisa izinto zokucwangcisa zomlomo: Le yinto abantu abaninzi abathi yipilisi. Yindibaniselwano yehomoni estrogen kunye neprogestin, kwaye abafazi mabayithathe yonke imihla ngaxeshanye.
Ipilisi yeprogesin kuphela: Oku kwaziwa ngokuba yipilisi encinci, ipilisi yokonga, okanye iPOP. Ngokungafaniyo nepilisi edityanisiweyo, i-POP inehomoni enye, iprogestin. Abanye abantu basetyhini basebenzisa le pilisi ngelixa bencancisa ukunqanda ukuphulukana nokubonelelwa ngobisi, njengoko i-estrogen yaziwa ukunciphisa ukubonelela kwabanye abantu basetyhini. Iipilisi zeprogesin kuphela azifane zinciphise ukubonelelwa ngobisi, kodwa abanye abantu basetyhini bayabakhathalela ezi mveliso, nazo.
Ukutyala: Ukufakelwa yintonga encinci oyifaka ugqirha wakho phantsi kolusu lwakho kwingalo ephezulu. Intonga iqulethe iprogestin ekhutshwa kancinci emzimbeni wakho kwisithuba seminyaka emithathu.
Inaliti okanye ukudubula: Le yinaliti yehomoni yeprogestin ezinqeni zakho okanye engalweni rhoqo kwiinyanga ezintathu. Ilawulwa ngugqirha. Ngokubanzi, abasetyhini kufuneka bavavanye ipilisi ye-progestin-kuphela kuqala ukufumanisa ukuba le hormone inefuthe na kubisi lwabo.
Isiqingatha: Abasetyhini banokunxiba isixhobo solawulo lokuzalwa kwisisu sabo esisezantsi, iimpundu, okanye umzimba ongasentla. (Sukuyibeka emabeleni akho.) Ikhupha kancinci iihomoni i-estrogen kunye neprogestin kwigazi lakho. Ubeka isiziba esitsha kube kanye ngeveki kangangeeveki ezintathu, emva koko uhambe ngaphandle kwesiqwengana seveki yesine. Kulapho uzakufumana ixesha lakho.
Isangqa sokucwangcisa sowasetyhini: Le yiringi oyibeka ngaphakathi kwilungu lakho lobufazi, kwaye ikhupha iihomoni zeprogestin kunye ne-estrogen kwigazi lakho. Uyayinxiba iringi iiveki ezintathu, emva koko uyikhuphe iveki yexesha lakho.
Ngaba ulawulo lokuzalwa kwehomoni luyaluchaphazela unikezelo lobisi?
Abanye abantu basetyhini abancancisayo bayanyamezela ukukhulelwa kwehomoni ngaphandle komcimbi. Kodwa ngamanye amaxesha, i-estrogen kwezi mveliso inokubangela ukuba ubisi lwakho lome.
Abantu abathile banomdla ngakumbi kwiihomoni kunabanye abantu, utshilo uRachael Martin, umongikazi obhalisiweyo eBowie, eMaryland. Kweminye, ipilisi encinci inokunciphisa ukubonelela ngobisi ngelixa abanye bengaboni mpembelelo kunikezelo lwabo nangokudutyulwa kweDepo.
Umngcipheko wokuncitshiswa konikezelo lobisi ubaluleke ngakumbi kwabasetyhini abancancisa umntwana ongaphezulu kweenyanga ezi-6 okanye abantwana babo abangancancisi kuphela. Ukuba sele ujongene nonikezelo lobisi olusezantsi, ulawulo lokuzalwa kwehomoni lunokuyenza mandundu le ngxaki.
Ke oku kuthetha ntoni kuwe? Ukuba ungumama ongumongikazi kwaye ufuna ukuzama ukuzalwa kwehomoni, thetha nomboneleli wakho. Uninzi loogqirha luya kuncomela ukuzama ipilisi encinci, kuba yeyona nto inokuthi ichaphazele ubisi lwakho.
Ezinxulumene: Ungalithatha ipilisi kagqirha ukuze wandise ubisi?
Oomama kufuneka baxoxe ngezona ndlela zintle zokulawula inzala kunye nomnikezeli wabo, utshilo uKelly Kendall, umongikazi obhalisiweyo kunye nomcebisi wezoncedo eCrofton, eMaryland. Kodwa ngokubanzi ukhetho lweprogesterone kuphela olunamathuba asezantsi okuchaphazela ubonelelo ngobisi.
Musa ukumangaliswa ukuba umzimba wakho usabela ngokwahlukileyo kwabanye. Wonke umntu wasetyhini wahlukile, kwaye umzimba wakho uya kusabela kwiihomoni ngendlela eyahlukileyo. Ukuba ulawulo lwakho lokuzalwa lubangela nayiphi na imiphumo emibi ephazamisayo, kubandakanywa ukubonelela ngobisi obuphantsi, cela umboneleli wakho malunga neenketho zakho. Njengoko ubona kuluhlu olungentla, zininzi iindlela zokuthintela ukukhulelwa ezikhoyo, kwaye enye yazo ingakulungela.
I-35 Eyona nto yokudlala ngokudlala ngesini emadodeni: Isikhokelo sakho sokugqibela
Humalog vs.Novolog: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
izihlunu zokuphumla zentlungu yomqolo ekhawuntarini
itshathi yegazi leswekile kubantu abangaswelekanga
ndingathatha i-diflucan kunye ne-monistat ngaxeshanye
yeyiphi ipesenti yabantu abanesifo seswekile abanodidi lokuqala
Ngaba icandelo lonyango libhatala ukubethwa ngumkhuhlane